Yintoni 'uMlawuli oyiNtloko' Ngokwenene?
Amandla oMongameli oMongameli aTshintshile ngaphaya kwexesha
Umgaqo-siseko wase-United States uthi uMongameli wase-United States "nguMlawuli oyiNtloko" wezempi zase-US. Nangona kunjalo, uMgaqo-siseko unikezela i- US Congress igunya elilodwa lokuvakalisa imfazwe. Njengoko oku kuphikisana ngokusemthethweni, yintoni emagunya omkhosi kaMlawuli oyiNtloko?
Isiqendu II Icandelo 2 lomGaqo-siseko-uMlawuli kwiCandelo eliyiNtloko-lithi "uMongameli uya kuba nguMlawuli oyiNtloko yeMikhosi kunye neNavy yaseUnited States, kunye namaMidiya aseMelika amaninzi, xa ebizwa Inkonzo yaseUnited States. "Kodwa, iCandelo le-1, iSiqendu 8 somGaqo-siseko unikezela iCongress amandla okuphela, Ukuvakalisa iMfazwe, ukunika iincwadi zeeMarque kunye nokugxeka, kwaye wenze iMithetho malunga nokuThuthwa koMhlaba kunye namanzi; ... "
Umbuzo, ovela phantse rhoqo xa kunesidingo esinzima, ingakanani na ukuba nayiphi na imikhosi yamkhosi inokuthi umongameli angabikho phantsi kokubhengezwa ngokusemthethweni kwemfazwe yiCongress?
Abaphengululi bomgaqo-siseko kunye namagqwetha abahlukileyo kwimpendulo. Abanye bathi uMlawuli oyiNtloko yeSigqeba somthetho unika umongameli, amandla angaphantsi angenamkhawulo wokusebenzisa umkhosi. Abanye bathi abaSunguli banike umongameli uMlawuli oyiNtloko yeNtloko kuphela ekumiseni nasekugcineni ukulawulwa komkhosi kwimpi, kunokuba anike umongameli amandla angaphezulu ngaphandle kwenkcazelo yokulwa kwemfazwe.
IsiGqibo seMfazwe ka-1973
Ngomhla ka-8 kuMatshi ngo-1965, i-9 ye-US ye-Marine Expeditionary Brigade yaba yimikhosi yokuqala yokulwa yase-US eyayiqhutyelwa kwiMfazwe yaseVietnam. Kwiminyaka eyisibhozo ezayo, uMongameli uYohnson, uKennedy, noNixon baqhubeka bethumela imikhosi yase-US kwi-mpuma ye-Asia ngaphandle kwemvume ye-congressional okanye isimemezelo esisemthethweni semfazwe.
Ngowe-1973, iCongress yaphendula ngokugqithisa iMpendulo yeMfazwe njengezame zokumisa ukuba yiziphi iinkokheli zebandla ezazibonile njengokukhutshwa kweConstitutional's ability to play a key role in the use of military decisions. IsiGqibo soMkhosi weMfazwe sidinga abaongameli ukuba baxelele iCongress of military engagement yabo yokulwa ngaphakathi kweeyure ezingama-48.
Ukongezelela, kufuna abaongameli ukurhoxisa yonke imikhosi emva kweentsuku ezingama-60 ngaphandle kokuba iCongress ithathe isigqibo esichaza imfazwe okanye inikezele ukwandiswa kokuthunyelwa kwamagosa.
Imfazwe Yobungozi kunye noMlawuli oyiNtloko
Ukuhlaselwa kwabangqonge ngo-2001 kunye neMfazwe eyalandela kwi-Terror yabangela iingxaki ezintsha kulwahlulo lwamandla okulwa phakathi kweCongress kunye noMlawuli oyiNtloko. Ukungena ngokukhawuleza kwamathuba amaninzi afumaneka ngamaqela aphilileyo aqhutyelwa yiinkonzo zonqulo kunokuba athembeke kuorhulumente bamanye amazwe adala isidingo sokuphendula ngokukhawuleza kunokuba avunyelwe iinkqubo zomthetho zeCongress.
UMongameli uGeorge W. Bush, kunye nesivumelwano sesigqebhinethi kunye namaKhosi aMaQumrhu aBasebenzi aManyeneyo anqume ukuba ukuhlaselwa kuka-9-11 kuye kwaxhaswa ngemali kwaye kwenziwa ngu-al Qaeda. Ukongezelela, ulawulo lwe-Bush lucacise ukuba iiTaliban, ezisebenza phantsi kolawulo luka-Afghanistan, zazivumela i-al Qaeda ukuba iqhube indlu kunye nokuqeqesha abaphangi bayo base-Afghanistan. Ngempendulo, uMongameli uBub Bush wathumela amabutho aseMelika ukuba ahlasele i-Afghanistan ukulwa ne-al Qaeda kunye neTaliban.
Kwiveki elilodwa emva kokuhlaselwa kwamaphekula - ngoSept.
18, 2001 - iCongress yadlula kwaye uMongameli Bush wasayina iSigunyaziso sokuSebenziswa koMkhosi wezoMkhosi weTebrorists Act (AUMF).
Njengomzekelo weklasi wezinye "iindlela" zokutshintsha uMgaqo-siseko , i-AUMF, ngelixa engavakalisi imfazwe, wandise amandla omkhosi womgaqo-siseko njengoMlawuli oyiNtloko. Njengoko iNkundla ePhakamileyo yase-United States ichazwe kwimeko yaseKorea ehlobene neNkundla ye- Youngstown Sheet & Tube Co. v. USawyer , amandla omongameli njengoMlawuli oyiNtloko akhula xa iNkcazo ibonisa ngokucacileyo injongo yayo yokuxhasa izenzo zeMlawuli oyiNtloko. Kwimeko yemfazwe yonke yentsholongwane, i-AUMF ibonise injongo yeCongress ukuxhasa izenzo ezizayo ezithathwe ngumongameli.
Faka iGuantanamo Bay, GITMO
Ngethuba lokuhlasela kwe-Afghanistan kunye ne-Iraq, imikhosi yase-United States "iboshwe" yabamba amaqhawe aseTaliban kunye ne-al Qaeda e-US Basal base baseGuantanamo Bay, eCuba, eyaziwa ngokuba yiGITMO.
Ukukholelwa ukuba i-GITMO - njengenkundla yempi-yayingaphandle kwegunya leenkundla zentlawulo yase-US, iBhodi yoLawulo lwe-Bush kunye nomkhosi wabamba abavalelwe khona iminyaka iminyaka engabhajulanga ngolwaphulo-mthetho okanye bavumele ukuba baphishekele imibango ye-habeas corpus efuna ukuvalelwa phambi ijaji.
Ekugqibeleni, kuya kuba kwiNkundla ephakamileyo yase - US ukugqiba isigqibo sokuba ngaba abavalelwayo okanye abachasayo ama-GITMO abathintelekileyo ukukhuselwa komthetho okuqinisekisiwe ngumgaqo-siseko wase-US baye bawaphula amandla kaMlawuli oyiNtloko.
IGITMO kwiNkundla ePhakamileyo
Izigqibo ezintathu zeNkundla ephakamileyo eziphathelele amalungelo abo bafunyanwa yiGITMO bachazwa ngokucacileyo ngamagunya omkhosi kaMongameli njengeMlawuli oyiNtloko.
Kwimeko ye- Rasul v. Bush , iNkundla ePhakamileyo ye-2004 inqume ukuba iinkundla zesithili zase-US zinegunya lokuva izicelo ze-habeas corpus ezenziwe ngabafokazi abavalelwa kuyo nayiphi na intsimi apho i-United States isebenzisa "igunya elipheleleyo kunye nelungelo elilodwa," kuquka GITMO. Inkundla yayalela ukuba inkundla zithili ziveze nayiphi na i-habeas corpus izikhalazo ezifakwe ngababoshiweyo.
Ulawulo lwe-Bush luphendule kwi- Rasul v. Bush ngokuyalela ukuba izikhalazo ze-habeas corpus ezigcinwe kwi-GITMO zivalelwe kuphela ngamakomidi enkundla yomkhosi, kunokuba zenziwe ngamakhotho aseburhulumenteni. Kodwa kwimeko ka-2006 ye- Hamdan v. Rumsfeld , iNkundla ePhakamileyo yenze isigqibo sokuba uMongameli Bush wayengenalo igunya lomgaqo-siseko phantsi kweMlawuli oyiNtloko yeSigqeba sokulawula ukuba abavalelwa bavalelwe emagunyeni omkhosi.
Ukongezelela, iNkundla ePhakamileyo yenze isigqibo sokuba ukugunyazwa koMbutho woMkhosi woMkhosi weTebrorists Act (AUMF) akuzange kwandise amandla omongameli njengoMlawuli oyiNtloko.
I-Congress, nangona kunjalo, yayixhomekeke ngokudlulisa uMthetho woTywala wamaTywala ka-2005, othi "akukho nkundla, inkundla, inkundla, okanye ijaji iya kuba negunya lokuva okanye ukuqwalasela" izikhalazo ze-habeas corpus ezigqitywe ngabanye abavalelwe kwiGITMO.
Ekugqibeleni, kwimeko ka-2008 ye- Boumediene v. Bush , iNkundla ePhakamileyo yagweba u-5-4 ukuba ilungelo eliqinisekisiwe ngokomgaqo-siseko we-habeas corpus lisetyenziselwa ababoshiweyo baseGITMO, kunye nawuphi na umntu oqeshwe njengowomkhosi "olwaziyo".
Ngomhla ka-Agasti 2015, kuphela abangama-61 kuphela ababesetyenziselwe ukubeka ingcinezelo ehlala e-GITMO, behla ukusuka kuma-700 aphakamileyo kweemfazwe e-Afghanistan nase-Iraq, kwaye malunga nama-242 xa uMongameli uB Obama eqala ukusebenza ngo-2009.
Ngokumalunga ne-Ofisi yoMhloli-Jikelele
UGeorge W Bush Iinkcukacha ezimfutshane
Imibuzo evela ku-Abraham Lincoln
Zingaphi Iibhilidi Ngaba uBarack Obama Veto?
Umlinganiselo weeNkqubo zoLuntu zaseMelika
Iingoma eziphezulu zeMotels
Imihla ngemihla yeveki
Saturn kwiNdlu yokuQala
I-Samhain Ancestor Meditation
I-SUP - Kayak Hybrids: Okufuneka Ukwazi
Iingxoxo zeMibono kunye neNinzi yeeNyulo: Phuza kwiBar
IMfazwe yaseMexico naseMerika 101: Ingqwalasela
Iimfazwe eziDume kakhulu kwiimfazwe zeMfazwe
Ukunamathela Esi Sombululo - Ngaphantsi kwe-$ 300 ye-US kwi-Cue Great Billiards Cue
Izinto Ezilishumi Ongazi Ngayo ngeCasino
I-VeggieTales ze-Movie eziphezulu
Isisathiso seshumi I-Meridiya yokuThetha ngokulandelelana
Uhlalutyo lwe 'Snow' nguCharles Baxter